Android Q Beta 3 inouya neyerima nzira yeiyo system yese | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro, panguva yemusangano weGoogle I / O, kambani yakaumba chikamu cheAlfabheti yakatanga Android QBeta 3. Iyi vhezheni, kuwedzera pakuzivikanwa ne "Q", ichave ichinziwo Android 10. Iyi beta nyowani inouya rinopfuura chete mwedzi mushure mekutanga kwe Beta 2 ane hunyanzvi hwakanyanya kwaive kusvika kweiyo nyowani uye yakavandudzwa multitasking iyo yakagamuchira zita rekuti "Bubbles" (Bubbles, rakashandurwa muchiSpanish).
Android Q ndiyo ichave yakachengeteka vhezheni yakaburitswa kusvika parizvino, uye iyi yechitatu bvunzo vhezheni inouya nenhau dzinonakidza dzatinozo tsanangura mushure mekusvetuka. Tichifunga kuti isu tiri kutaura nezve beta vhezheni, kuburitswa kwega kwega kunotarisirwa kusanganisira akawanda matsva ayo anokwezva kutariswa, asi isu tinogona zvakare kuona kuti chimwe chinhu icho ivo chavainge vawedzera mushanduro yapfuura chinonyangarika sei nekuti, mukufunga, ivo vafunga kuti vaisave zano rakanaka kudaro. Pakati pekuchinja kunowanzo nyangarika, izvo zvinonyanya kumira zvakanyanya shanduko mumufananidzo wechinhu.
1 Android Q Beta 3 inowedzera kunyangwe chengetedzo
2 Inowanikwa kwete chete paPixels
Android Q Beta 3 inowedzera kunyangwe chengetedzo
Pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinosvika ne Android Q Beta 3 isu tine:
Tsigiro yeiyo biometric yekusimbiswa padanho rehurongwa, ichibvumira vashandisi kuve nehutongi hukuru pamusoro pekuti maApplication anokwanisa kuwana nzvimbo yavo uye kurambidza kuvhurwa kwemaapplication kumashure, kudzikamisa kuwana kune zvisingagadzirisike zvidhori zvemidziyo senge Serial nhamba kana IMEI uye inosarudzira iyo MAC kero kana uchibatanidza kune akasiyana maWiFi netiweki.
Dema rima yeiyo yese inoshanda system. Inogona kuvhurwa kubva Zvirongwa / Ratidza uye chinhu chakanakisa pamusoro penyaya iyi ndechekuti ichaderedza mabhatiri kushandiswa kana mudziyo wedu uine OLED skrini. Izvi zvinodaro nekuti mumhando iyi yechiratidzisi chete mapikiseli akabatidza anoshandisa simba, kureva kuti, vatema havapedze bhatiri nekuti vadzima.
Akapfuma Notifications nemhinduro dzakangwara.
Rarama Caption, basa idzva rakagadzirirwa kuti riite zvinyorwa zvemavhidhiyo, podcast uye mameseji anotambirwa pane yedu kifaa.
Maitiro anotibvumidza isu kudzora kufamba nemaoko.
Focus Mode, chinhu chitsva chichatibatsira kutarisa pazvinhu zvatinoda kuti zviitwe.
Kudzora kwevabereki kutsva kunodaidzwa Family Link.
Inowanikwa kwete chete paPixels
Android Q Beta 3 iri inowanika pane mamwe akawanda madivayiri kunze kwePixels, iri kuwanikwa zvakare mune mamwe maAsus, akakosha, Huawei, Xiaomi, Nokia, OnePlus, OPPO, realme, Sony, Tecno uye Vivo. Izvi tinofanirwa kutenda chirongwa chinonzi Project Treble, izvo chaizvo izvo, chirongwa chekuunza shanduro dzichangoburwa dzeApple kune mamwe madhiraini.
Varidzi vePixel vanoda kuisa iyi yechitatu beta yeApple Q vanofanirwa joina chirongwa che beta kubva Iyi link. Varidzi vezvimwe zvishandiso zvakatsigirwa vanofanirwa kubvunza ruzivo rwunopihwa nemhando dzakasiyana. Iwe uchaisa Android Q Beta 3 pane chako chishandiso?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android Q Beta 3 inosvika ine yakasviba modhi yesisitimu yese
Red Hat Innovation Awards: vakundi veiyi XIII edition
Red Hat Enterprise Linux 8 Yakaburitswa Pamutemo, Heino Izvo Itsva